Indlu yelizwe kufuphi neParis kunye neVersailles
Indlu (eyayisakuba sisitali sasefama) kufuphi neParis
Ayivulelwanga amatheko, amatheko omhla wokuzalwa okanye iminyhadala yosapho.
Le ndlu yelizwe ingaba ifanelekile ukuhlala okufutshane okanye ukuhlala ixesha elide kwiiholide entwasahlobo nasehlobo.
Indlu inokuthatha abantu abayi-2 x 2 (ibhedi entsha) +1 ibhedi yomntwana + 1 ibhedi yomntwana (isicelo xa ubhukisha).
Amathuba okuba ngamathuba athile okuhlalisa iibhedi zabantwana ukuze kuvunyelwane nomninimzi.
Indawo yokuhlala engaphakathi AYIKUTSHAYA.
Indlu inetafile yangaphandle kunye nezitulo kunye ne-Weber barbecue.
Ngaphandle kwe-jingi yabantwana (i-60kg Max), intendelezo yegrabile apho abantwana banokukhwela iibhayisikili, ii-scooters, njl ... ukuba uzisa. Ehlotyeni, cwangcisa ibhola, iibhola ze-pétanque, njl. kunye nesigqoko se-straw.
Izindlu zangasese ezisendlini zisebenza kunye nesikhululo sonyango lwangaphandle, akufanele uphose kwindlu yangasese nantoni na ngaphandle kwephepha langasese emngciphekweni wokungasebenzi (akukho iitawuli, iitampon, njl ...).
Ukukwazi ukupaka izithuthi ngaphakathi kwipropati ukuya ngasekhohlo kwendlu
Oku renti AKUVULELEKANGA kumbutho wamaqela, iintsuku zokudityaniswa, amatheko, iindibano ezinkulu zosapho, njl.
Iindleko zokucoca ziquka amashiti kunye neetawuli, ukucocwa kwemigangatho, izindlu zangasese, ifenitshala kunye nezipili.
Ngakolunye uhlangothi, ekuhambeni kwabo, abahambi baya kushiya bacocekile kwaye bahlambulule izitya (ezithathwe kwi-dishwasher) kunye nezixhobo zasekhitshini, itafile kunye nentsimbi, ... zigcinwe kwindawo yazo yangaphambili.
Iigrayiti zebarbecue ziyacocwa ukuba zisetyenziswa.
Iingxowa zenkunkuma kunye neebhotile zeglasi kufuneka zifakwe kwizikhongozeli zangaphandle ezilungiselelwe le njongo
Ukuhamba kwakho, izitya zasekhitshini kunye nezixhobo ezisetyenzisiweyo ziya kucocwa kwi-dishwasher okanye nguwe kwaye zibuyiselwe kwindawo yazo yokuqala xa uhamba.
Sicela ukuba izibane zingayekwa xa abahambi bengekho emini.
Ngenxa yokusingqongileyo, ebusika, ukungabikho kwakho emini, ukufudumala kuya kuncitshiswa. Ebusika siyakubulela ngokungashiyi iifestile zivuliwe kwaye ngaxeshanye ukufudumeza kuvuliwe.
Doors sibonile ziya kufumaneka endlwini ebonisa iidilesi eziphambili kunye neenkcukacha practical (iivenkile, iindawo zokutyela, iimarike, isitishi, iivenkile, uloliwe station, njl) kunye nemisebenzi engundoqo kunokwenzeka akasekude endlwini, iindawo zenkcubeko kunye notyelelo, njl. ..
Siza kukunika naluphi na ulwazi olongezelelweyo
Utyelelo lwaseMontfort l'Amaury imizuzu eli-10 kude kunye neenqaba ze-Anne de Bretagne, i-Thoiry Zoo (imizuzu eli-15), iVersailles, iNqaba yayo kunye nepaki, iindawo zokutyela ze-haute cuisine kunye neendawo zokutyela ezincinci zemveli okanye ezingaqhelekanga, ihlathi laseRambouillet (imizuzu engama-20 ngo. imoto) kunye amachibi of Holland kunye beach ifakwe, esibayeni Rambouillet, i-France Migniatre ipaki e Elancourt (imizuzu eli-10 ngemoto).
Kufuphi nendlu, ukuhamba okanye ukukhwela ibhayisekile (engabonelelwanga) kwithafa phakathi kwamasimi engqolowa kunye nombona, kunye nehlathi kunye nedama elikufutshane (imizuzu engama-20 ngeenyawo).
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, ungathandabuzi ukuqhagamshelana nawe nge-sms okanye ngomnxeba (ukususela ngo-8:00 a.m. ukuya ku-11:00 p.m.) kwinombolo evelayo xa ubhukisha.